त्रिवि आइओएम किन 'भद्रगोल' ? | | Nepali Health
त्रिवि आइओएम किन ‘भद्रगोल’ ?
पूर्वडिन प्राडा अरुण सायमीको टिप्पणी
२०७३ भदौ ३ गते २१:४३ मा प्रकाशित
प्राडा अरुण सायमी
पूर्व डिन, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान (आइओएम)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा अहिले जस्तो भद्रगोल कहिल्यै भएको थिएन । अहिले मतलव पछिल्लो दुई तीन बर्ष यता । मैले आइओएममा डिनको रुपमा पाँच बर्ष विताएँ । मेरो कार्यकाल सकिएको अहिले ठ्याक्कै चार बर्ष भयो ।
त्यस अवधीमा मैले आइओएमको मिलेसम्म स्तरबृद्धि गरेँ भन्ने लाग्छ । तर दुखको साथ भन्नै पर्छ त्यसपछि भने आइओएम उधोगति शुरु भयो ।
मैले छोडेपछिको चार बर्षको अवधीमा आइओएममा ६ जना डिन बने । प्राडा कुमुद काफ्ले, प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा, मेरै आफ्नै दाई प्राडा प्रकाश सायमी, प्राडा शशी शर्मा, प्राडा रतेन्द्र श्रेष्ठ र प्राडा राकेश श्रीवास्तव ।
तर अपेक्षा अनुसार कसैले पनि आइओएम सुधारका काम गर्नै सकेनन् । कतिपयले पाएनन् कतिपयले पाएर पनि आँटेनन् । जे होस काम हुनै सकेन् ।
बरु यो अवधीमा आइओएम र टिचिङ अस्पताल डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्ने स्थल हो है भनेर परिचित भयो । पछिल्लो चार बर्षको अवधीमा मेरा मित्र प्राडा गोविन्द केसीले आइओएम र टिचिङ अस्पताललाई राष्ट्रिय रुपमा मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा परिचित गराउनुभयो ।
कहिले फलानो डिन हटाउ आन्दोलन, कहिले फलानो डिन बनाउ आन्दोलन । कहिले फलानो कलेजलाई सम्वन्धन नदेउ आन्दोलन, कहिले फलानोलाई कारबाही गर आन्दोलन ।
यी सबैमा उहाँलाई विद्यार्थी तथा रेजिडेन्टसको साथ हुन्थ्यो । त्यो भन्दा बढी मिडियाको साथ हुन्थ्यो । खासमा मिडियाले नै उहाँलाई यो स्तरमा ल्याइपुरयाएको हो । तर यतिका आन्दोलन भइसक्दा समेत आइओएममा खासै सुधार हुन् सकेको छैन् ।
सुन्दा मिठा लाग्ने दर्जनौ माग राख्दै आन्दोलन गरियो र दर्जनौँ सम्झौता भए तर त्यसको कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्दैन् । अथवा कार्यान्वनय भएकै भएपनि खास जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन् । बरु आन्दोलनले आफ्नै कलिक्सबीच बिग्रह र फाटो ल्याउने काम गरयो । त्यसैले पनि मैले मेरो कार्यकाल पछिको आइओएमको अवस्था भद्रगोल भयो भन्ने गरेको छु ।
मैले मेरो कार्यकालमा के के गरे ?
चारवटा मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिएँ : मेरो कार्यकालमा डिन अहिले जस्तो होइन पूर्ण अधिकारप्राप्त थियो । मैले गर्ने प्रस्तावलाई फ्याकल्टीबोर्डले अनुमोदन गर्दथ्यो अनि सिधै उपकुलपति कार्यालयमा पुग्दथ्यो । आइओएम र उपकुलपति कार्यलयबीच यति हार्दिकता थियो कि हाम्रो प्रस्तावलाई पुग्नासाथ स्वीकृति पाइहालिन्थो ।
म डिन हुँदा आइओएमले चार वटा नयाँ मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दियो । त्यो पनि निर्बिबाद रुपमा । त्यसको कुनै विवाद भएन । सबैभन्दा पहिला काठमाडौँमा एउटा पनि मेडिकल कलेज थिएन त्यसैले किष्ट मेडिकल कलेज दिएँ । दोस्रो चाहि चितवन मेडिकल कलेज । तेस्रोमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा दिएँ । चौथोमा नेपाल आर्मी मेडिकल कलेज ।
त्यो भन्दा अघि हाम्रो खाली तराईमा मात्रै थियो । भैरहवा, बीरगञ्ज , जनकपुरमा मात्रै थियो । त्यसैले मैले भौगोलिकता मिलाएरै नयाँ कलेजको सम्वन्धन दिने निर्णय गरेको हुँ । यस विषयमा अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाएको छैन । त्यसैले यो निर्विवाद निर्णय हो भन्ने मेरो दावी हो ।
शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरेँ : पहिले पोष्ट ग्राजुएटस पीजी तह यहाँ मात्रै थियो । मैरै समयमा मैले पीजी युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा र नेशनल मेडिकल कलेज बीरगञ्जमा गरेँ । अहिले एमडीमा यति मारामार भएको छ ।
डीएम र एमसीएच महाराजगञ्जलाई दिने निर्णय गराएँ । यो ठूलो उपलव्धी हो । किनभने अव नयाँ पुस्ताका लागि पीएचडी सरहको चिकित्सा अध्ययन यहि उपलव्ध हुने व्यवस्था भयो ।
टिचिङ हस्पिटलको पूर्वाधारमा विस्तार गरेँ : मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको अवधारणा हाम्रै प्रयासमा सुरु भएको थियो र मेरै कार्यकालमा त्यो संचालनमा ल्याइयो ।
उता भाटभटेनीले बनाइदिएको नयाँ इमरजेन्सी पनि मेरै कार्यकालमा हो । मैले नै भाटभेटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङसंग सम्झौता गरेको हुँ । त्यसबाहेक गणेशमान भवनको व्लक समेत मेरै कार्यकालमा थपिएको हो । गणेशमानको पूर्णकदको शालिक मैले नै राख्न लगाएको हुँ ।
त्यतिवेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । एक दिनको भेटमा उनले मसंग भने, टिचिङ हस्पिटलमा विपीको नाममा आखा केन्द्र बन्यो , मनमोहनको नाममा मुटुकेन्द्र बन्यो, गणेशमानका नाममा बन्यो अनि जनताको नाममा पनि इमरजेन्सी भवन बन्यो हाम्रो पाटी माओवादीको नाममा पनि एउटा बनाउन परयो भन्नुभयो र उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर, मैले हुन्छ भने । अनि त्यो पनि अघि बढ्यो हालाकी अहिलेसम्म पुरा भइसकेको छैन् । टिचिङको सबैभन्दा अग्लो भवन त्यहि हो ।
त्यसयता खास केही भएको छैन् । भएको छैन भन्दा मेरो दाई( प्रकाश सायमी)को पालामा महाराजगञ्ज क्याम्पसको एमबीबीएस सीटसंख्या ६२ बाट बढेर ७५ पुग्यो त्यत्ति हो । म डिन भएको बेलामा कोटा बढाउन निकै प्रयास गरेँ तर स्टुडेन्ट युनियनको चर्को विरोध हुने गर्दथ्यो । त्यसैले बढाउन सकिएको थिएन । दाईको पालामा युनियन थिएन । त्यसैले बढाउन सजिलो भयो ।
प्रश्नपत्र बेचेको आरोप लाग्यो :
मेरा विरोध गर्ने समूहका साथीहरुले पनि अहिले चाहि कुरा गरेको छन रे भन्ने सुन्छु । कि अरुण डिन हुँदा आइओएममा राम्रो काम भएको थियो । तर त्यतिवेला एउटा गज्जबको घटना भयो ।
म माथि दुई करोडमा प्रश्न पत्र बेचेको आरोप लाग्यो । आन्दोलन भयो । १९ दिनसम्म टिचिङ अस्पताल बन्द भयो । छानवीन समिति गठन भयो तर समितिले मलाई दोशी ठहर गर्ने आधार नै पाउन सकेन् । बरु अर्का जिम्मेबार साथीलाई कारबाही भयो ।
खासमा त्यतिवेलाको कुरा सम्झिदा हासो लाग्छ । मसंग भेटन आउने सबैजनालाई यो कुरा म आफै सुनाउछु । अरुचिजमा हिनामिना गरयो भन्ने भनेको भए सुहाउथ्यो होला, सम्वन्धन दिँदा खायो , वा भवन बनाउदा खायो भनेको भएपनि हो कि भन्ने हुन्थ्यो होला तर प्रश्नपत्र बेचेको भन्ने आरोप थियो ।
बास्तवमा त्यो लफडा दुई जना बरिष्ठ पदाधिकारीबीचको झगडाले हावामा बाहिर ल्याइएको आरोप थियो । अहिले त्यसको बास्तविकता सबैले बुझिसके ।
किन चर्केको थियो त्यतिवेला आन्दोलन ? टिचिङ अस्पताल कांग्रेस समर्थक चिकित्सक कर्मचारीहरुको पहिले देखिनै गड थियो । डा सशांक कोइरालाले राजनीतिक गर्ने थलो समेत यहि थियो ।
म डिन भएपछि त्यसमा केही नियन्त्रण भयो । गड भएको आफ्नो क्षेत्रमा लगाम लागेपछि स्वभाविक रुपमा मान्छेलाई रिस उठछ । अनि मलाई हटाउन खोजिएको थियो ।
निहु पाइएको थिएन तर प्रश्नपत्रको काण्ड आएपछि सजिलो भयो आन्दोलन यति धेरै चर्को भयो कि १९ दिन अस्पताल नै बन्द भयो । तर मलाई निकाल्न सकेनन बरु मेरो एक बर्ष कार्यकाल नै थप भयो ।
आइओएमको डिनको पावर अहिले छैटौ नम्बरमा :
मैले छाडेपछिको चार बर्षमा प्राडा गोविन्द केसी केसी आठ पटक अनसन बसे । यसले उनी परिचय राष्ट्रिय रुपमै चिनिए । तर उनको आन्दोलनको उपलव्धी मिडियामा आएजस्तो गरि भइसकेको होइन ।
सुन्दा अत्यन्तै राम्रो लाग्ने तर कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठेरो हुने माग राखेर उनी अनसन बस्छन र सम्झौता समेत गर्छन । त्यहि कारण हो उनका सम्झौताहरु कार्यान्वनयमा नआएका ।
जे जति कार्यान्वनयमा आउछन् ती आम जनतालाई भन्दा पहुचवालाकै पक्षमा हुन्छ । यो कुरा तलका सर्वसाधारणले नबुझेको हुनसक्छ । र डा केसीको विरोध गर्ने माफियाको कित्तामा पर्ने भएकोले पनि सार्वजनिक रुपमा भन्न सक्दैनन् र चाहदैनन पनि ।
त्रिविका एक उच्च अधिकारीले यसै साता मसंगको भेटमा आइओएम डिनको पावरको बारेमा कुरा गर्नु भएको थियो । उहाँले भन्नु भएको थियो । यतिवेला आइओएममा एक नम्बरमा डा केसी, दोस्रो नम्बरमा काउन्सिल, तेस्रो नम्बरमा अख्तियार, चौथो र पाँचौ नम्बरमा क्रमश शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय र छैटौँ नम्बरमा बल्ल आइओएमको डिन छ ।
यो अवस्थामा आएको पनि केसीको आन्दोलनले नै हो भन्छु म । जसले त्रिवि र आइओउमको स्वायत्ततामा नै अफ्टेरो पारेको छ । मेरो पालासम्म आइओएमको डिन केयुका उपकुलपति भन्दा पावरफुल थियो । किनभने मेडिकल कलेज समेत सिधै डिनले निर्णय गर्न सक्थ्यो । केयुमा यस्तो निर्णय गर्न सिनेट बस्नुपर्छ र उसले दिन्छ ।
डा शशीलाई अन्याय भएकै हो :
म पछि भएका सबै ६ जना डिनहरु डा गोविन्द केसीसंग जोडिन पुगे । कोहीलाई हटाउन र कोहीलाई राख्न भन्दै डा केसी आमरण अनसनमा बसी रहेँ । त्यसमध्ये मेरो दाईँ डा प्रकाश र डा शशीको चर्चा विशेष रुपमा रहयो ।
दाईलाई डिन बन्न मनै थिएन जबरजस्ती बनाइएको हो । सिनियारिटीको आधारमा भन्दै बनाएको हो । खासमा सिनियारिटीको आधारमा हुँदा म नै फेरी बन्ने कुरा हुन्थ्यो तर डा केसीहरुलाई त म प्रश्नपत्र बेच्ने व्यक्ति परेँ । त्यसपछि सिनियरको आधारमा दाईँलाई बनाइयो । दाईले मान्नुभएकै थिएन , डिन बनाउछन भनेर मोवाइल समेत स्वीज अफ गरेर बस्नुहुन्थ्यो ।
तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मै संग आग्रह गरेर दाईलाई बनाउन समस्या सुल्झिन्छ भनेपछि दाई डिन बन्नुहुन्छ भनेर मैले जिम्मा लिएको हुँ । दाईलाई मैले नै कन्भिन्स गरेँर झण्डै १९ महिनासम्म बन्नु भयो पनि । तर दाईका धेरै असन्तुष्ठि थिए । तैले मलाई डिन बनाएर फसाइस भन्दै मलाई गालि गरिराख्नुहुन्थ्यो । म हासिमात्र राख्थे ।
दाई खुरुखुरु काम चाहिने मान्छे तर त्यतिवेला त्रिवि र आइओएमको सम्वन्ध अत्यन्त बिग्रीएको थियो । एक अर्कामा चरम अविश्वास पैदा भएको थियो । त्यसले गर्दा दाईले राम्ररी काम गर्न पाउनुभएन् । अनि राजिनामा दिनुभयो ।
त्यसपछि डिनमा आउनुभयो प्राडा शशी शर्मा तर उहाँलाई पनि डा केसीको अनसनको सिकार बनाइयो । रिक्तपदमा त्रिविको नियमन कानून अनुसार नियुक्त भएपनि डा केसीले हुन्न भनेपछि उनलाई त्यतिखेरका सरकारप्रमुख रहेका खिलराज रेग्मीको ठाडो निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको हो । एउटा व्यक्तिलाई काम गर्नै नदिई जबरजस्ती मिथ्या आरोप लगाई हटाइएको हो । यसमा जति डा केसीको दोश छ त्यो भन्दा बढी दोश तत्कालिन सरकार प्रमुख रेग्मीको छ ।
डाक्टर शर्माले आफूलाई गैरकानूनी रुपमा हटाएको भन्दै अदालत गुहारे । तर अहिलेसम्म उनको मुद्धाको छिनोफानो भएको छैन् । सर्बोच्चले गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरणमा मुछिएका ७ जनालाई रिट हालेको भोलिपल्टै आदेश सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको थियो । तर बर्ष वित्यो डा शर्माको विषयमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेन् । यसमा अदालतको समेत अन्याय गरेको हो । किनभने अदालतले पक्ष वा विपक्षमा त निर्णय त गर्नैपर्छ । ढिलो फैसला गर्नुपनि अन्याय हो ।
बरिष्ठताको मागले पनि डा केसीलाई अप्ठेरो ः
डा केसीले बरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । तर अहिले त्यो मागले पनि केसी स्वयंलाई अप्ठेरो भएको छ । किनभने बरिष्ठताको कुरा गर्दा एक नम्बरमा त मै छु । उहाँका रोजाईवाला साथीहरु म भन्दा पछि हुनुहुन्छ । त्यसैले डा केसीलाई अप्ठेरो परेको छ ।
त्यसैले अहिले आरोप लागेका विवादास्पदलाई पुन छानवीन गरि कारबाही गर्ने लगायतका मागहरु थप्नु भएको छ । त्यो भनेको हामीलाई नै लक्षित गरेको माग हो । जसरी पनि मन नपरेका साथीहरुलाई निशेध गर्ने योजना । तर म फेरी पनि भन्छु कसैलाई मन परे वा नपरेर नियम र कानून बदल्न मिल्दैन् ।
म फेरी पनि भन्छु यदि बरिष्ठतालाई आधार मान्ने हो भने त्यो १ नम्बरबाटै सुरु हुन्छ २ नम्बरबाट होइन् । यदि होइन त्रिवि कानून अनुसार गर्ने हो भने प्राडा शशीको निर्णय छिटो हुनुपर्छ । विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ ।
चितवनमा मात्रै १०४ जनामा ‘स्क्रब टाइफर्स’को सङ्क्रमण
नेपाल मेडिकल कलेजमा नर्सिङ फ्याकल्टी सहित अन्य कर्मचारीको माग